हेड टु हेड : नेपाल र मलेसियामा को बलियो? - नेपाल समय
हेड टु हेड : नेपाल र मलेसियामा को बलियो?
काठमाडौं- नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसियासँग दुई खेलको अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० सिरिज खेल्दै छ । नेपालले किनरारा ओभलमा भोली (शनिबार) बिहान ७:४५ बजे सिरिजको पहिलो खेल खेल्दै छ । त्यसपछि नेपालले दोस्रो खेल आइतबार खेल्ने छ ।
सिंगापुरमा आयोजना हुने आइसिसी टी-२० विश्वकप एसिया फाइनलको तयारीमा रहेको नेपालले एकदिवसीय मान्नेतापछि यो दोस्रो टी-२० सिरिज खेल्दै छ । नेपालले पहिलो सिरिजमा युएईलाई पराजित गरेको थियो । हेरौ नेपाल र मलेसियामा को बलियो ।
नेपालले हालसम्म मलेसियासँग टी-२० अन्तर्राष्ट्रियका चार खेल खेलेको छ । चार खेल मध्यमा नेपालले तीन खेल जित्दा मात्र एक खेल गुमाएको छ । पहिलो पटक नेपालले एसिसी कप अन्तरगत २७ अक्टोबरमा २००७ मा कलेसियासँग भिडेको थियो ।
उक्त खेलमा नेपालले मलेसियालाई २१ रनले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै एसिसी कप अन्तरगत नै २२ नोभेम्बर २००९ मा भएको भेटमा भने नेपालले खेल ६ विकेटले गुमाएको थियो ।
त्यसपछिका दुई भेटमा भने नेपालले जित हात पारेको छ । एसिसी कप अन्तरगत नै २० मार्च २०१३ मा भएको भेटमा नेपालले मलेसियालाई १९ रनले पराजित गरेको थियो । त्यसपछि २०१८ मा भएको पछिल्लो भेटमा नेपालले मलेसियालाई ८ विकेटको पराजित गरेको थियो ।
नेपाल र मलेसिया, टी-२० हेड टु हेड
नेपाल १०१/२ जित १००/१० मलेसिया (विश्व टी-२० एसिया अन्तर रिजनल छनोट २०१८)
नेपाल १६३/८ जित १४४/९ मलेसिया (एसिसी टी-२० कप २०१३)
नेपाल ११२/७ पराजित ११३/४ मलेसिया (एसिसी टी-२० कप २००९)
नेपाल १२१/९ जित १००/१० मलेसिया (एसिसी टी-२० कप २००७)